Muraayada, Farshaxanka iyo Farshaxanka Supplier Supplier-SHUNDA - Darbiga Dayaxa Shafka leh muraayad bir alwaax ah dhabarka sabbaynaysa leh muraayad laadlaad ah Muujinta Qurxinta gidaarka qolka fadhiga ee qolka jiifka OEM iyo warshad | SHUNDA
Shelf Dayaxa Dabiiciga ah oo gidaar leh oo leh muraayad Alwaax dhabarka loo saaray Sabbaynaysa shafka leh muraayada Laadlaad ee Kaydinta Muujinta Qurxinta gidaarka qolka fadhiga
* Ku soo dhawoow shelf iyo muraayad kasta oo habaysan *
Tani waa mid cajiib ah muraayadda gidaarkaka buuxa soo jiidashada warshadaha rustic, oo dhamaystiran oo leh shelf anfacaya. Tani waxay u fiicnaan doontaa qolka fadhiga, marinka ama musqusha.
Naqshad wareeg ah, muraayadani waxay leedahay shelf qaab qaabeysan oo leh faa'iidooyin badan. Ku laal qolka fadhiga ama dariiqa oo u isticmaal shelf si aad u muujiso shumac qurux badan.
Tani waxay sidoo kale ku habboon tahay musqusha oo leh shelf kaliya oo ku habboon qabashada burushyada, shanlooyinka iyo dhammaan timaha yaryar iyo qalabka qurxinta.
Qayb ka mid ah muraayadaha derbiga ee kala duwan. Qaab kasta, cabbir iyo qaab kasta oo la qiyaasi karo, waxaanu haynaa muraayadda saxda ah ee gurigaaga.
Qalab alwaax/bireed, galaas
Baakad sanduuqa gudaha + kartoon
1.OEM & ODM, Muraayadaha kasta waxaa lagu habeyn karaa midabka, cabbirka.
Warshada Qurxinta Guriga ee Shunda waa shirkad soo saarta muraayadaha oo bixisa wax soo saar, nashqado, iib iyo adeeg iib kadib macaamiisha caalamka. fanka iyo farsamada gacanta Alaabooyinka sida muraayada dayaxa, muraayada dhalada, muraayad leh shelf, shelf wareegsan, shelf dayax badhkeed, shelf moon,shelf leh muraayad iwm.
kaas oo si weyn looga isticmaalo Guriga, dhismayaasha xafiisyada, suuqyada dukaamaysiga, suuqyada waaweyn, dugsiyada, mashruuca hudheelada, waxaanu sidoo kale bixinaa adeegyada ganacsiga OEM iyo ODM.
Alaabooyinka tayada sare leh, tartanka qiimaha leh iyo adeegga ugu fiican ayaa ah raadintayada aan joogsiga lahayn. Gaadhi waayo-aragnimo xagga wax-soo-saarka muraayadda iyo dhoofinta waxay aaminsan tahay inay ku siin karto khibrad iskaashi oo wanaagsan. Iyada oo hufnaan cusub, qaabab kala duwan iyo adeeg feker leh
Alaabooyinkayagu waxay ku guulaysteen kalsoonida iyo kalsoonida macaamiisheena,Fiiri fariintaada oo ku soo dhawoow Shiinaha.
Hore: Qiimaha Warshada ee Shiinaha Soo Saarashada Gaarka ah ee Sanduuqa dahabka ah ee Gacanka Baakadaha hadiyadaha alwaax
Xiga: Alwaax dhibco leh oo gidaar ku dhejisan Shelf alwaax sabbaynaya Shalfado ka laadlaad Muujinta Qurxinta gidaarka
muraayad leh shelf
shelf leh muraayad
Qurxinta nuska dayaxa wejiga xiddig galaas mir...
Qurxinta jir bir ah oo gacan lagu sameeyey Half dayaxa Moo...
Qurxinta wajiga dayaxa muraayad muraayad ah oo leh h...
Muraayada muraayadda wejiga dayaxa ee Led ee gidaarka guriga...